Adam Jiloo - Wikipedia
Koloneel Adam Jiloo Weeboo(1917-2005) hoggantoota Qabsoo Baalee keessa tokko yoo ta'u itti aanaa Jeneraal Waaqoo Guutuu ta'ee waraana geggeessaa ture.
Dhaloota[edit | Lakkaddaa gulaali]
Adam Jiloo bara 1917 godina Baaleetti dhalate.
Qabsoo[edit | Lakkaddaa gulaali]
Bara 1962 keessa, Hayilasillaasen kutaa-biyyaa Baalee daawwachuu deeme. Daawwannaa kanarrattis "nuti Itoophiyaanonni uummata tokko; alaabaa fi biyya takka qabna" jedhee haasaa godhe. Gootichi Adam Jiloo akkas jedhee deebise "nuti uummata tokko miti, waan wal nu fakkeessu takkallee hin qabnu". Maalif akkas akka jedhe yeroo gaafatamu, Adam Jiloo akkas jedhee deebise "Itoophiyaa keessatti, mootin Amaara, abbaan seeraa Amaara, bulchaan Amaara, ergamaanillee Amaara. Nuti Oromoonni dhimma keenyarratti murteessuf mirga hin qabnu. Kanaafuu, wanti wal nu fakkeessu tokkollee hin jiru".
Ergaa dhimmoota kanarratti waliin haasa'anii booda, Hayilasillaasen Adamiin amansiisuu waan dadhabeef, doorsisuuf ergamaa Sumaaleti jechuun yakkuu yaale. Humni tikaa fiwudaalaas yakka biyya ganuu jedhuun qabanii akka hidhan ajaje. Akkaataa kanaan bara 1962 qabamee mana hidhaa gale. Wagga tokko erga hidhaa turee booda bara 1963 gadi lakkifame.
Bara 1963, Oromoonni Baalee gabrummaarratti qabsoo eegaaluuf murteessun Jeneraal Waaqoo Guutuu hogganaa godhanii filatani; Adam Jiloo ammoo itti aanaa ta'ee filatame. Baruma kana, Waaqoo fi Adam namoota biroo dabalatanii, leenjii waraanaa fudhaachuuf akkasumas meeshaa waraanaa barbaacha gara Somaaliyaa deeman. Somaaliyaarraa meeshaa waraanaa muraasa erga argatanii booda, gara Baaletti deebi'anii waraana riphxee-loltummaa jalqabani.
Qabsoo Baalerratti injifannoo guddaa galmeessani. Qabsoon kun, kutaa-biyyaa Baalee fi gartokkeee kutaa-biyyaa Sidaamoo bilisa baasee ture. Injifatamuu Hayilaasillaaseetin kan rifatan michoonni isaa, USA fi Israa'el gargaarsa godhaniin qabsoo Baalee deebisanii dhaamsan. Qabsaa'onni Baalees mootummaa fiwudaalaa wajjin haraara gochuun qabsoon kun bara 1970 xumurame.
Hayilasillaaserraa aangoo kan fudhata Dargiin, himaammatni inni Oromoorratti qabu adda hin turre. Oromoota jajjaboo hedduu wajjin himaammata kana akka jijjiiruf gaafachaa turan. Dargiin akka kana hin fudhanne erga baranii booda, bara 1977 deebi'anii qabsoo eegaluuf gara Somaaliyaa deeman. Somaaliyaa hoogganaa kan ture Siyaad Baarren, maqaa 'Somaalee Aabboo' jedhamuun Oromoota Sumaalomsuuf yaalaa ture. Adam Jiloo dhimma Oromoo Sumaalomsuu kana fudhachuu waan dideef, bara 1977 hanga 1980 hidhamee mana hidhaa ture. Dhiibbaa Addii Bilisummaa Oromoo mootummaa Sumaalerratti godhee, bara 1980 gadi lakkifame. Mootummaan Somaaliyaa garuu isa Sumaalomsuuf hordofuu ittuma fufe. Yeroo tokko ani Sumaaledha jedhi dubbadhu yeroo jedhaniin, angaawota Sumaale duratti "Wallaahi-Billaahi-Tallahi ani Oromoo" jedhee dubbate. Sababa kanaan ammas deebisanii hidhani. Haala kanaan, Somaaliyaa keessatti yeroo hedduu hidhamaa gadi lakkifamaa deebi'ee hidhamaa ture.
Dararaan Somaaliyaa waan itti hammaatef, bara 1988 gara Baaletti deebi'e. Mootummaan Dargiin batalumatti qabee mana hidhaa galche. Bara 1991, yeroo Dargiin kufu mana hidhaatii gadi lakkifame.
Asafa Jalata. Hajii Adam Jilo Webo: A Model Oromo Nationalist Hero (1917-2005), Oromo Studies Association, 2006 Conference Proceedings
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Jiloo&oldid=30000"
This page was last edited on 6 Muddee 2017, at 07:28.